कोरोना भाइरस Archives – Page 39 of 40 – Samacharpati
चैत ७ मा रिलिज गर्ने भनिएकाे चलचित्र ‘नीरफूल’ कोरोना भाइरसको त्रासकाे कारण स्थगित
काठमान्डाैँ, २७ फागुन । फागुन ३० मा रिलिज गर्ने भनिएकाे चलचित्र ‘नीरफूल’ लाई चैत ७ मा रिलिज गर्ने भनिएकाे थियाे । चैत ७ लाई नै केन्द्रमा राखेर ट्रेलर र नयाँ पोस्टर सार्वजनिक सँगै प्रचार–प्रसार गर्ने अभियान समेत जारी राखिरहेको बेला विश्वव्यापी रुपमा संक्रमण बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरसको त्रासले चलचित्र ‘नीरफूल’ निर्देशकलाई गम्भीर बनाएको छ । सर्वसाधारणको […]
काठमाडौँ, २७ फागुन । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा दुई जना नेपालीमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण देखिएको छ । विश्वभर आतंक मच्चाउँदै आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणमा यूएईमा रहेका दुई नेपालीमा पनि देखा परेको हो । यूएईको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुई जना नेपालीसहित १४ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको छ । १४ जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएसँगै […]
भारतमा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रम देखिएकाेले नेपालीलाई भारत नजान आग्रह
लम्की, २६ फागुन । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट बच्न अत्यावश्यक काम परेमात्रै भारत जान नेपाली नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । यो समय नेपाली नागरिक बढी मात्रामा घर फर्कने समय हो । हाल भारतबाट दैनिक सयौँ नेपाली होली पर्व, चैते दशैँ तथा नयाँ वर्ष मनाउनका लागि नेपाल फर्किन थालेका छन् । नगरपालिकाले […]
कोरोना भाइरसप्रति सतर्कता अपनाउँदै नेपालसहित १४ देशका नागरिकलाई कतार प्रवेशमा रोक
काठमाडौं, २६ फागुन । नेपालीको प्रमुख रोजगारगन्तव्य मुलुक कतारले नेपालसहित १४ मुलुकका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ । विश्वव्यापी रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसप्रति सतर्कता अपनाउँदै यी १४ देशका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको त्यहाँको द गभरमेन्ट कम्युनिकेसन अफिस (जीसीओ) ले जनाएको छ । अल्पकालीन प्रवेशमा रोक लगाइएका मुलुकहरूमा नेपाल, बंगलादेश, चीन, इजिप्ट, भारत र इरान छन् […]
अस्ट्रेलियामा रहेका एक नेपाली विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको पुष्टि
काठमाडौं, २५ फागुन । अस्ट्रेलियामा १ नेपाली विद्यार्थीमा कोरोनाभाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ । रुघाखोकीको लक्षण देखिएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न अस्वीकार गरेर होबार्टमा एउटा ठूलो होटलमा काम गरिरहेका ति नेपालीमा कोरोना भाइरसको पुष्टि भएको बताइएको छ । फेब्रुअरी २६ मा नेपालबाट सिंगापुर हुँदै होबार्ट पुगेका उनी २० वर्षका विद्यार्थी भएको बताइएको छ । स्वास्थ्य विभागले होटलमा […]
कोरोना भाइरसकै कारण भक्तपुरमा हुन लागेकाे ‘भक्तपुर महोत्सव’ स्थगित
काठमाडौँ, २३ फागुन । भक्तपुर नगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण ‘भक्तपुर महोत्सव’ स्थगित गरेको छ। पाँचदिने सो महोत्सव आगामी चैत ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म यहाँ आयोजना हुँदै थियो। तत्कालका लागि महोत्सव स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए। नगरपालिकाले महोत्सवलाई भव्यरुपमा सफल पार्न, होटल व्यवसायी, सांस्कृतिककर्मी, शिक्षा सरोकारवाला, बाजाका गुरुलगायतका पक्षहरुसँग छलफल गर्ने […]
काठमाडौँ, २३ फागुन । चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस दक्षिण कोरियामा थप ५१८ जना नयाँ संक्रमित फेला परेसँगै देशमा कूल संक्रमितको सङ्ख्या ६ हजार २८४ जना पुगेको छ । दक्षिण कोरियामा हालसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको छ जसमा वृद्ध र पुरानो स्वास्थ्य समस्या रहेका छन् । हालसम्म दक्षिण कोरियामा नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको कोरियामा रहेका […]
अहिलेसम्म नेपालमा १ जनामा पनि देखिएकाे छैन कोरोना भाइरसकाे संक्रमण
काठमाडौँ, २३ फागुन । भारतमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बिहीबारसम्म ३० पुगेको छ । प्राप्त पछिल्लो सूचना अनुसार भाइरसबाट सङ्क्रमित सबैभन्दा पछिल्लो व्यक्ति उत्तर प्रदेशको गाजियावादमा भेटिएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । यसअघि बिहीबार नै संघीय स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्षबर्धनले यही मार्च ४ देखि अहिलेसम्म २९ जना सङ्क्रमित भएको बताए । राज्यसभामा बोल्दै उनले भने […]
सौराहामा कोरोना भाइरसको डरले पर्यटक आउन छाडेपछि होटल व्यवसायीले कर्मचारीलाई दिए बिदा
चितवन, २२ फागुन । कोरोना भाइरसको डरले पर्यटक आउन छाडेपछि सौराहाका होटल व्यवसायीले कर्मचारीलाई बिदा दिन थालेका छन् । यहाँका होटलमा १५ देखि २० प्रतिशत हाराहारी मात्र पर्यटक रहेका छन् । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष दीपक भट्टराईका अनुसार गत वर्ष यतिवेला ९० प्रतिशत हाराहारी होटलका कोठा बुकिङ हुने गर्दथे । नेपाली कार्यक्रम भइरहेकाले आजसम्म […]
कोरोना भाइरसकाे कारण ज्यान गुमाउनेहरुको सम्झनामा सन्तोष जङ्ग खत्रीले गाए यस्ताे गीत
पाेखरा, २२ फागुन । गायक तथा हास्य कलाकार सन्तोष जङ्ग खत्रीको आवाजमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी गित निकै मर्मस्पर्शी रहेको छ। उनका अनुसार यो गित गित मात्र नभएर एउटा समाजमा जनचेतना फैलाउने सन्देश पनि रहेको छ । उनले थप्दै भने , बिशेषगरि यो गित मैले कोरोना भाइरसले ज्यान गुमाउनेहरुको सम्झनामा गाएको हु र सम्पुर्ण जनमानस यो […]
कोरोना भाइरस संक्रमितलाई उपचार गर्न पोखरामा ६० शैयाको आइसोलेसन वार्ड तयार
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. विनोद विन्दु शर्माले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेशका २ वटा अस्पताललाई हब अस्पताल र २७ अस्पताललाई स्याटेलाइट अस्पतालको रुपमा उपयोग गर्ने गरि तयारि गरिएको बताउनुभयो । यस्तै पोखरामा तत्कालका लागि ६० बेडको आइसोलेसन […]